Global Voices teny Malagasy » Ireo Feo Avy Ao Afrika Atsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Oktobra 2018 15:24 GMT 1	 · Mpanoratra Bronwyn Nandika Candy
Ny iray amin'ireo olana goavana atrehan'ny firenena ankehitriny dia ny fizarazarana lalina izay manjaka ao anatiin'ny Kongresy nasionaly afrikana (ANC), eo amin'ny fitondràna, izay nanomboka nitranga tamin'ny taona lasa. Nitranga ireo fizarazarana ireo vokatry ny ady fahefana ho amin'ny fitantanana ny ANC sy ny firenena rehefa niala ny filoha Thabo Mbeki tamin'ny taona 2007. Mbeki izy tenany ihany sy ny fahavalony malaza, filoha lefitra teo aloha Jacob Zuma no atidohan'io ady io. Nesorin'i Mbeki i Zuma  tamin'ny fiandohan'ny taona, noho izy voahenjika ho nanao kolikoly. ary tokony hiatrika fitsaràna amin'ny taona 2006. Nahazo hery ny ANC noho ireo mpiaradia taminy Alliance avy amin'ny elatra ankavia, ny Kongresin'ireo Sendikà an'i Afrika Atsimo sy ny antoko kaominista Afrikàna Tatsimo, ireo rehetra ireo izay nanao hetsika ho fanohanana an'i Jacob Zuma. Mahazo fanohanana avy amin'ny antoko neoliberaly sy ireo filohanà orinasa i Mbeki. Teo anelanelan'izay fotoana izay, natahorana hanimba tsikelikely ny fahafahany mitondra ny firenena ny fisamantsamahana nisy tao anatin'ny antoko. Araka ny Commentary. co.za  manoratra toy izao:
Maneho hevitra ny South Africa Blog  fa mihatsaravelatsihy ny antokon'i Zuma:
Manjary feo mafy an'ireo vondron'ady sosialy eo an-toerana sy ny fiarahamonina sivily ny Indymedia South Africa , anisan'izany ny ady ho an'ny fananan-trano sy ny fanomezana tolotra fikarakarana ho an'ireo mahantra. Mponina ao Afrika Atsimo an-tapitrisa maro no miaina ao anatin'ireo tranobongo miorina any amin'ireo faritra tsy ara-dalàna, ary olana goavana iray ny famoizana aina rehefa kilan'ny afo ireo tranobongo ireo, satria ny olona voatery mampiasa an'ireo labozia sy ireo famanana amin'ny alalan'ny parafina. Nandritra ny haintrano farany teo, zazalahy kely iray vao herintaona no maty tao amin'ny faritra tsy ara-dalàna tao Kennedy Road, ao amin'ny faritanin'i KwaZulu Natal:
Tsy ela akory izay, nanatanteraka ny andro voalohany indrindra nanaovany ny tsy fampiasàna fiarakodia i Afrika Atsimo, ary nampikoriana ranomainty marobe tao anaty tontolombolongana teo an-toerana ny zava-misy. Niombon-kevitra ny ankamaroan'ireo olona fa fandaniana andro fotsiny ny fahitana hoe rafitra mikasika ny fitaterana iombonana tsy sahaza no napetraky ny firenena. Maneho ny fahatsapana ankapoben'ny ankamaroan'ireo olona ao Afrika Atsimo ny Moral Fiber , ao anatin'ny hafany mikasika ilay lohahevitra:
Farany, eo amin'ny naoty maivamaivna kokoa, manoratra blaogy i Cherryflava  mikasika ny fikarakarana fetibe iray ho an'ny whisky  ao Cap Town.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/14/127207/
 Nesorin'i Mbeki i Zuma: http://www.businessday.co.za/specialreports/shaik.aspx?Page=BD4P21455&MenuItem=BD4P21455
 fetibe iray ho an'ny whisky: http://www.whiskylivefestival.co.za/festival/festival.php